अपराधी घटनाका आरोपी मेयर मण्डलमाथि कारवाही खोई ? - हाम्रो जनकपुर
अपराधी घटनाका आरोपी मेयर मण्डलमाथि कारवाही खोई ?
२०७७ चैत्र २३, सोमबार ०९:२२
मटिहानी घटना :
जनकपुरधाम । निर्धालाई मात्रै कानुन लाग्दैंन, बलियालाई पनि सो कानुन लाग्छ । यो सर्वमान्य कुरो हो ।तर, महोत्तरीको मटिहानीका मेयर हरि प्रसाद मण्डलको हकमा माथि उल्लेखित कुरो लागु भएको छैन । किनभने उनी मेयर हुन् । पद, पैसा, पावर र पहुँचको आडमा उनले कानूनलाई मुट्ठीमा लिएको देखिएको छ । कानूनका रखवाला प्रहरी, प्रशासनलाई चाकडी गरेर मेयर मण्डलले मटिहानी नगरक्षेत्रभित्र मच्चाउने आतंककोे विरोध गर्दा टोले गुण्डाहरु लगाएर स्थानीयहरुलार्इृ तह लगाउने गरेका छन् । उनीबाट पीडित भएकाहरुले न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनको अड्डा चहार्दा पनि निर्धाका कुरा सुनुवाई नभएको जनगुनासो प्रशस्तै सुन्न पाईन्छ । कुरा गरौं गत दशैंमा मेयर मण्डलको निर्देशन एवं प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको एउटा अपराधिक घटनाको ।
यसरी भएको थियो घटना :